नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको अध्यक्षमा ऋषिराम पौडेल | Vetkhabar
Home कृषि नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको अध्यक्षमा ऋषिराम पौडेल
काठमाडौं ।नेपाल ह्याचरी उद्योग संघकको अध्यक्षमा ऋषिराम पौडेले निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको पन्ध्रौ शाधारण सभा तथा महाधिवेशनले पौडेललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको हो । अधिवेशनले १८ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
संघको नयाँ कार्यसमितिको निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पोख्रेल,बरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर,प्रथम उपाध्यक्ष डा. बलराम किसी,दित्तिय उपाध्यक्ष ज्ञानवहादुर बिसुराल,महासचिव बलराम सन्जेल,कोषाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने रहका छन् ।
त्यस्तै, सचिवमा बिबेक भट्टलाई चयन गरेको छ । सदस्यहरुमा युवराज अधिकारी,नवराज पौडेल,निरन्जन कुमार श्रेष्ठ,खगेश्वर खनाल,मनोज रानाभाट,मुकुन्द कडेल,प्रेम बोगटी,बिष्णु प्रसाद रिमाल,वसन्त अर्याल निर्वाचित गरेको छ ।
Previous articleएनभीएमा डा. शीतलकाजी श्रेष्ठको ह्याट्रिक, डा. वंशी शर्मालाई पराजित गर्दै भारी मतान्तरले विजयी
Next articleनेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ जनकपुर शाखा अध्यक्षमा महतो